Forum serasera malagasy Hay ve sekoly fôpla ity ENAM ity e - Dinika forum.serasera.org
Hay ve sekoly fôpla ity ENAM ity e
Fitohizan'ny hafatra : Hay ve sekoly fôpla ity ENAM ity e
rabaradaka - 23/05/2017 12:34
Ny tena moa tambanivohi-dahy tsy mahay sy tsy mahita izay fahitan'ny olona nefa na izany aza mba misy mitsipalotra hain'ny tena ihany.
Ny sekoly ambony ENAM dia mahagaga mihitsy fa aiza ve ka ny Tale ao dia Licence no diplomany ary ny chef de service Bac. Tena mba tsy rariny kosa e ! Any ivelany anefa izany tale (directeur) izany dia manana doctorat daholo, ny chef de service manana DEA daholo, mba sendra tafaresaka tamin'ireny vazaha mpitantana ny ENA, ENAP, EAP, ... ireny aho dia gaga fa ny antsika tena mandeha tsy amin'ny tokony ho izy. Izany DFC izany ange hono zalahy ka tsy mahay na teny frantsay aza e !
Tsy mahagaga raha olona tsy mamely sy tia tena ary mpanao kolikoly no mivoaka avy ao.
Aiza ve ka misy olona nahazo diplome amin'izany atao hoe expertise tao amin'ny ENAM nefa tsy nandia ny ENAM akory ny tongony raha tsy tamin'ny nandoa vola. Misy mpianatra (auditeurs) tsy afaka tamin'ny fanadinana nefa dia nampiakarina ho lasa deuxième année tsotra izao.
Tsy nampoiziko ho sekolin'ny vendrana toa izany io ENAM io, tsy mahagaga raha ireny no fihetsika adala sy tsy voahevitra ataon'ny Praiministra, tsy mahagaga raha champion amin'ny fangalaram-bato ireo administrateur civil, tsy mahagaga raha mangalatra tany ny inspecteurs des domaines ...
rabaradaka - 23/05/2017 12:42
Aza alefa any ny saina fa vola be koa vao afaka miditra ao.
ilafy - 10/09/2017 11:51
tsy marina zany ry baina ekeko fa misy mahay ny fotsy dia ny malagasy koa torak'izany fa ny fitantantana izay ry ngah tsy dia mila loatra diplaoma fa mila afetsena dia mety e fa na ny an'ivelany dia mitovy @ izany fa jereo fotsiny ao @ colas ao tana firy ny ingenieur fotsy aho nefa dia mpanao lalana sy trano no atao
meloman102 - 13/02/2018 14:27
otran sarotra ny hino anzany aloha ra tsy oe aseho eto mits nga ny CV
Monjalaza - 07/03/2018 20:09
aza faly hitsikera fa midira ao dia zay ianao vao tena mahita ny marina.
Page rendered in 0.0588 seconds